Ngobuxhakaxhaka ukwanda okubhabha kwi moya zorhwebo uqhuba abantu ngakumbi nangakumbi ukuba amaxhwebhu jet zabucala. imigca amasiko Long, Ukuhlolwa zokhuseleko TSA, moya ephithizelayo, nje ezinye bajonga okubhabha kwi Jets zorhwebo. Abantu abadla ukubhabha kwiklasi yokuqala okanye udidi zoshishino ngoku kusiba ujonge uqoqosho amaxhwebhu jet yabucala. kunjalo, ngokungafaniyo ne Airlines zorhwebo, yayo akukho lula ukufumana iindleko ukuqasha a jet. Ngoko ke apha ke uphendule umbuzo: indlela kubiza malini ukuya charter moya yabucala?
Okunye Service We Nika
Ixabiso ukuqasha a jet inikwa akwiidola ngeyure endiza nganye. njengoko kulindelekile, iindleko yahluka phakathi imifuziselo ezahlukeneyo moya. Ezinye aircraft obutofotofo, kanti abanye ukuba obutofotofo. Ezinye iinqwelo zibe nesithuba phakathi kwabakhweli kweshumi ngaphezu kokuba, ngoxa abantu abaselula ambalwa ezine izihlalo abakhweli kuphela.
Enye iinqwelomoya charter incinane emarikeni i Cessna vesi Mercedes, ekwazi ukuhlalisa ngayo 4-5 abakhweli. Kwakhona kuyenzeka ukuba abe moya engambi charter: ungakwazi charter a Cessna ucaphulo Mercedes malunga $1700 ngeyure endiza nganye.
ezinkulu ngandlel ngaphezu esi sibhalo Mustang nguye Learjet 60, leyo isihlalo ukuya 8 abakhweli. Made yi zibubone Aerospace e Wichita, Kansas kunokubiza malunga $3400 iyure okubhabha Kwiphepha Lamalungelo Learjet nganye 60.
Ekupheleni ephakamileyo moya efana Gulfstream 550, endiwazuze ngayo $8600 iyure esemoyeni nganye. Inceda a bit ukuba isihlalo ngayo 14-19 abakhweli.